अमेरिकी दूतावासले पत्याएन कोमललाई, भन्छिन् -‘अमेरिकाले नपत्ताउने ममा के छ ?’ « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
अमेरिकी दूतावासले पत्याएन कोमललाई, भन्छिन् -‘अमेरिकाले नपत्ताउने ममा के छ ?’
अमेरिकामा कार्यक्रम गर्न भन्दै काठमाडौंमा रहेको अमेरिकी दूतावासमा भिसा आवेदन दिएकी नेपालकी चर्चित गायिका कोमल ओलीको भिसा आवेदन अमेरिकी दूतावासले अस्वीकृत गरिदिएको छ । केहि बर्षदेखी निरन्तर रुपमा अमेरिकाको भिसाका लागि प्रयास गरेकी ओलीको भिसा आवेदन यसपटक पनि अस्वीकृत भएको हो ।
कोमल ओलीको कार्यक्रम गर्ने भन्दै अमेरिकामा रहेका प्रवर्द्धकले विभिन्न राज्यमा कार्यक्रम बेच्न सुरु गरिसकेका भएतापनि ओलीको भिसा अस्वीकृत भएपछि अन्यौल सृजना भएको छ । नामै नसुनेका गायक गायिका अमेरिकामा पुगिसक्दा पनि ओलीले भिसा नपाएपछि निराशा व्यक्त गरेकी छिन् ।
पत्रकार रामजी ज्ञवालीसँग कुराकानी गर्दै ओलीले भनिन्, ‘खै किन पत्ताउन्न मलाई अमेरिकाले ? अमेरिकाले नपत्ताउने ममा के छ त्यस्तो ? कोमलले अगाडी थपिन खै के भएर अमेरिकी दूतावासले मलाई भिसा दिएन केही थाहा छैन’ ।
कोमल यस पटकको तिज अमेरिकामा आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएर मनाउने सोचमा रहे पनि अब त्यो सपना चकनाचुर हुने देखिएको छ ।